"Dameero si aad u fool xun u dhaqmaya ayaa sidey u ordayaan guryaha isla galaya" - BBC News Somali
"Dameero si aad u fool xun u dhaqmaya ayaa sidey u ordayaan guryaha isla galaya"
Shacabka degmada Buur Saalax ee gobolka Mudug ayaa cabasho weyn ka muujinaya Dameero ku soo batay deegaanka oo dhibaatooyin badan ku haya.
Siciid Cabdi Nuur oo ah Xog hayaha maamulka degmada Buur Saalax ayaa BBC-da u sheegay in Dameeraha oo aan deegaanka laga lahayn ay muddooyinkii dambe buux dhaafiyeen waddooyinka ayna saameyn waxyeello ah ku yeesheen nolosha bulshada.
"Dameeruhu horta ma aha xayawaan dhulkan laga isticmaalo, oo dadku waxay aad ugu badan yihiin isticmaalka Geela. Waxaan garan weynay Dameerahan meel ay ka yimaadeen, kuwii dhulkan laga lahaa tiro ka badan ayaa deegaanka soo galay, duleedkii magaalada iyo dhul daaqiina kuma aysan ekaanine waxay gudaha usoo galeen magaalada", ayuu yiri Siciid.
Isu socodkii dadka iyo gaadiidka ayuu sheegay inay ciriiri weyn galiyeen, nadaafad xumana abuureen.
"Dhibaatooyinka ay nagu hayaan waxaa ka mid ah inay laamiga fariisanayaan, baabuurtii ayaa meel ay maraan weynaya, laamigii bay ku xaarayaan bartanka magaalada, habeenkii oo dhanna way qeylinayaan oo waxay sasinayaan carruurta", ayuu yiri.
Caafimaad darro kusoo korodhay magaalada ayuu sheegay in la tuhunsan yahay inay Dameeraha sabab u yihiin, wuxuuna carrabka ku dhuftay in saalada Dameeraha oo magaalada ku badatay awgeed ay carruur badan xanuunsadeen".
Dhanka kale wuxuu Siciid sheegay in Dameeraha ay goobaha dadka isugu yimaadaan ku sameeyaan falal uu ku qeexay "anshax xumo".
"Magaalada bartankeeda ayey ku qooqayaan oo ay isku qabsanayaan ama isku fuulayaan, waxaasna wax aan annagu naqaanno ma aha, si aad u qaab daran oo xishood xunna wuu isku isticmaalayaa, iyagoo is ceyrsanaya ayeyna isla galayaan makhaayadaha gudahooda, guryaha iyo goobaha kale ee ay dadku ku badan yihiin", ayuu yiri.
Hase ahaatee, Xogyaha ayaa sheegay inaysan waxyeelleyn doonin xayawaanadan, balse ay qorsheynayaan sidii ay hab nabad ah uga saari lahaayeen magaalada.
Cabashada laga muujinayo Dameeraha ayaa noqoneysa tii ugu horreysay ee nooceeda ah, oo gaarta heer maamul, gudaha Soomaaliya.
Shalay Talaadadii ayey ahayd markii dalka Kenya, oo daris la ah Soomaaliya laga soo saaray amar lagu mamnuucayo ka ganacsiga hilibka Dameeraha.
Image caption Kenya ayaa laga mamnuucay ganacsiga Hilibka Dameeraha
Wasiirka beeraha ee dalka Kenya ayaa ku dhawaaqay in la joojiyay ka ganacsiga iyo gowraca dameeraha dalkaas gaar ahaan in laga ganacsado haragiisa iyo hilibkiisa.
Wuxuu wasiirka sheegay in la maxkamadeyn doono ciddii lagu helo gowraca dameeraha.
Wasiirka beeraha Kenya Peter Munya ayaa amar ku bixiyay in la xiro dhammaan kawaanada iibiyo hilibka dameeraha.
Wuxuu sidoo kale sheegay in ciddii u hogaansami weydo amarkan in la xiri doono xarumahooda ganacsi.
Waxay arrintani imaaneysaa walaac ka taagan tirada dameeraha ku nool dalkaas oo yaraaday kaddib markii ay soo bateen dameeraha laso xaday ee lagu kala iibsado suuqa madow.